नाथ्रो फुट्ने रोग र यसको उपचार
जनवरी 31, 2019 जनवरी 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, नाथ्रो फुट्ने रोग
नाथ्रो फुट्ने रोग र यसको उपचार । आजकल मानिसहरू नाकबाट रगत आउने समस्याले पीडित बढि देखिन थालेका छन् । गर्मी मौसममा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । नेजल ब्लिडिङ नाकबाट रगत दुई तरिकाबाट आउँछ । एउटा नाथ्रोको अगाडिबाट र अर्को नाकको पछाडिबाट । सामान्यतया नाकको सबैभन्दा अगाडि रहेको रक्त नलीबाट रगत प्रबाह हुन्छ । नेजल ब्लिडिङलाई समएमै उपचार गर्न सकेमा सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । घरमै वा चिकित्सकको सामान्य सल्लाहमा यसको सहज उपचार हुन्छ ।
यस्तो रोग प्राय: थोरै मानीसलाई हुने गर्छ । विशेष गरी वृद्धबद्धामा यस्तो समस्या देखिन्छ । नाकको पछाडिपट्टीको रक्त नलीबाट रगत प्रबाह हुन्छ । नेजल ब्लिडिङ हुँदा अस्पतालमा नै भर्ना भएर इएनटी विज्ञको सहयोगमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेजल ब्लिडिङ गर्मी, सुख्खा र चिसो मौसमा हुने गर्छ । सामान्यतया सबै उमेरका मानिसमा यस्तो समस्या देखिएपनि ५० देखि ८० वर्ष उमेरका मानिसमा नाथ्रो फुट्ने बढी समस्या हुन्छ ।
नाथ्रो फुट्ने कारण
नाकमा चोट परेमा नाथ्रो फुटी रगत आउने गर्छ । नाकको बाहिर हल्का चोट वा भित्र पीडा भएमा वा चिसो वा सुख्खाबाट नाकभित्र जलन भएमा पनि नाथ्रो फुट्छ । गर्मीको समयमा पानी कम खाँदा नाकमा सुख्खा भएमा नाथ्रो फुट्छ । रगत जम्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या हुन्छ । एस्पिरिन लगायतका औषधी र कलेजो सम्बन्धि कुनै रोगले पनि रगत जम्नबाट रोक्छ । उच्च रक्तचापका कारण पनि नाकबाट रगत आउन सक्छ ।
प्राय एउटा नाकको प्वालबाट मात्र रगत बग्छ । यदि रगत धेरै वगेको छ भने दुईओटा प्वालबाट नै रगत बग्छ । कहिलेकाही नाकको रगत घाँटी र पेटसम्म पुग्न गई बिरामीलाई वान्ता आउन सक्छ । नाकबाट अत्यधिक रक्तश्राब भएमा धमिलो देख्ने, टाउको झमझमाउने, मनमा दुबिधा बढ्ने र कमजोरीको अनुभव हुन्छ ।
आज मैले यो रोगको सरल उपचार बारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु । यो रोगको सुरुमा कागती नीबूवा निचरेर रस निकाल्ने र २-४ थोपा नाकमा थोपा चुहाउने । यसो गर्नाले नाकबाट बग्ने जस्तोसुकै रगत किन नहोस् बन्द हुन्छ । हामीले विगत लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं ।
← १८ दिनसम्म चलेको महाभारत युद्धमा कुन दिन के भयो ?
मांशाहार र मानव स्वास्थ्यको सम्वन्ध →
मे 17, 2019 मे 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
सेप्टेम्बर 11, 2018 डिसेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 9
3 thoughts on “नाथ्रो फुट्ने रोग र यसको उपचार”
Pingback:हिस्टेरियाको लक्षण, उपचार तथा रोकथाम